Dagaal u Dhaxeeya labo Jabhadood oo ka Dhacay Aaga Godey – Rasaasa News
Godey – S/Galbeed [May 25, 2009], wararka ka imanaya dhulka S/galbeed ee lagumaysto ayaa sheegaya in uu dagaal dhexmaray Jabahaada Xoraynta S/galbeed JXSG, iyo ONLF garabka uu hogaamiyo Maxamed Cumer Cismaan.
Dagaalakan ayaa la sheegay in uu ka dhacay deeganka lagu magacaabo Sariir oo udhaxeeya gobaladda Qoraxay iyo Godey, Dagaalkan oo lasheegay in uu ka dambeeyay
weerar ay soo qaadeen Koox ka tirsan ciidanka ONLF Garabka Maxamed Cumer, ayaa la sheegay in uu mudo socday,dagaalkan ka dib ayaa la sheegay in reer aan halka lagu dagaalamay ka fogayn Kooxdani ONLF ku dishay Ruux Haweena oo Xaamilo ah taas oo na loogu sheegay magaceeda Shaacir Abuubakar.
Sarkaal ka tirsan Ciidanka Mujaahidiinta S/galbeed oolagu magacaabo (Maxamed Oogle) ayaa noo shegay in uuna jirin dhankooda wax khasaare ah oo ka soo gaadhay dagaalkan, balse wuxuu sheegay qoladda kale uu ka soo gaadhay dagaalkan khasaare.
Bilihii ugu dambeyay ma jirin dagaalo dhexmaray labadan Ciidan, waxaana lagu jiray jiilaal adag iyo Xamlo ay wadeen Ciidamadda Gumaysigu taas oo sababtay inay yaraadaan dagaaladii udhexeyay jabhadahan kuwaas oo ay ku dhinteen tiro aad ufara badan oo dhalinyaro ah iyo N/hurayaal qaali ah.
Waxaa dagaalka iyo colaada u dhaxaysa ururka ONLF dhexdiisa iyo Jabhada Xoreynta Somali Galbeed ka dambeeya Maxamed Cumar cismaan oo isagu amaray colaadan ka dib markii uu gudaha galay Maxamed Siraad Doolaal oo watay ciidan ONLF oo doonayey ama ka digayey dhibaatooyinka uu soo wado Ina Cumar, Dolal oo xiligaasi gacansaar la yeeshay Ciidanka JXSG, ka dibna Dr. maxamed Sirad Dolal oo aan isagu aaminsanayn in uu dagaal dhex mari karo labo naftood hure ay garabka Maxamed Cumar Cisman u dileen xaalad aan wali la sharxin.
Xiliyadaas Waxaa dhacay Dagaalo lagu hoobtay oo u dhaxeeyay Naftood hurayaalka Somalida Ogadeeniya, dagaaladaas oo sababtooda lahaa Maxamed Cumar Cismaan oo irdhadii ay galiyeen shacabka Somalida Ogadeeniyana aan wali laga dhayin.
Dagaalkan cusub ee uu wali ka dhex muuqanayo amarka Ina Cumar oo haatan dabada kula jira gumaysiga Itobiya ayaa waxaa ka iman kara dhibaato kale oo aan laga soo waaqsan.